Funda imodeli yeenqwelo moya kunye noLawulo lweRadio- Ikkaro
yokuqalisa >> Ulawulo lwerediyo kunye neenqwelo moya zemodeli
Ulawulo lwerediyo kunye neenqwelo moya zemodeli
Ihlabathi lomzekelo wenqwelomoya kunye nolawulo lukanomathotholo. Ndisoloko ndinomdla ngeli hlabathi endifuna ukulibuyisa.
Bukela uthotho ukuze wenze eyakho idrone elawulwa ngonomathotholo.
Eli candelo liphelelwe lixesha, kufuneka siqhubeke sithetha ngeehelikopta, iidroni, nazo zonke iintlobo zezixhobo esinokuthi sizakhe ngomthumeli, izinto ezimbalwa kunye nengcinga eninzi nolwazi.
Icandelo kunye nezikhokelo ziya kusebenza njengesingeniso kweli hlabathi linomdla, umdlalo okanye umlutha, nantoni na ofuna ukuyibiza.
Sigxininisa Hovercrafts okanye hovercraft
Musa ukucinga ukuba yinto elula, kodwa inyathelo ngenyathelo liya kukunceda.
Imoto ye-Cirin RC exhaswa ziibhendi zerabha
Ngequbuliso uyababona kwaye uyathandana nenkangeleko yabo. Ngenxa yokuba intle, intle kakhulu kwaye xa uqala ukujonga kwaye ubona ukuba inakho na, ufuna ukuba nayo, yenza enye ngoluhlobo.
Igama lakhe nguCirin imoto elawulwa ngonomathotholo exhaswa ziibhendi zerabha. Akukho bhetri, kungcono ukuthi amandla e-elastic, kodwa eneneni ngumtya werabha weemitha ezi-4,5.
Le "injini" ibonakala ngathi ayisonwabisi. Kodwa i-Cirin iyakwazi ukufikelela phantse kwi-50 km / h ngesantya esiphezulu kwaye inokuhamba ujikeleze i-150 yeemitha, ayisiyonto yokuzimela, kodwa ingaphezulu koko bendikulindele kwisiqwenga serabha. Into endichukumisileyo sisantya esiphezulu, esingaqhelekanga.
Ngoyilo oluphefumlelweyo njengoko isitsho UMax greenberg, omnye wabadali bayo, ngo-1950's iimoto ezibalekayo kunye namathambo entaka.
Intshayelelo kwiihelikopta zombane
Ndiza kuqala uthotho lwezithuba ezinikezelwe kwii-helicopter zombane ze-RC.
Njengayo iinqwelomoyaNgokuqhubela phambili kwitekhnoloji kunye ne-China isenza sitshiphu kwaye sitshiphu, ii-helikopta ze-RC zithengiswe ngexabiso elifanelekileyo. (Okanye ubuncinci, njengeenqwelomoya, asisayi kuba noxinzelelo xa sizitshayisa)
Ubuninzi bololu chungechunge luza kuba yindibano yehelikopta ebungakanani obuphakathi, (70 cm Rotor ubukhulu), endizakuyibonisa inyathelo ngenyathelo. Izizathu zolu khetho ziyahluka, kwaye eyona iphambili, lixabiso, kuba ikrisimesi yekrisimesi eboniswe kwisithombe ixabisa i-euro ezi-8 kuphela.
Inqwelo moya yomzekelo, ukwakha IKKARO 002, intshayelelo.
Siza kuqala ukwakha olunye uhlobo lombane, i-Ikkaro 002.
Ngokuhambelana nomoya wale bhlog, ndiza kusebenzisa ngaphezulu kwezinto eziqhelekileyo, ikhadibhodi, ukusuka kwipakethe yefenitshala ye-Ikea kunye nentonga kunye nesiqingatha semophu, (ialuminiyam).
Ukubonakala kwangoku kwe-spawn kulandelayo,
Con prototype yokuqala into esiyenzileyo, ukuhamba ngenqwelomoya bekuqinisekisiwe kancinci, ngenxa yobunzima obuphantsi bezinto, umphezulu wamaphiko kunye nemoto esetyenzisiweyo.
Ndicebisa isifundo kwi iihelikopta zombane. Ngokuqinisekileyo uyayithanda nawe.
Intshayelelo yenqwelomoya yombane wenqwelomoya. Yakha i-Ikkaro001
Ndiza kuqala uthotho kwinqwelomoya yombane wenqwelomoya, uhlala uvela kumoya wale webhusayithi. Izisombululo kwezoqoqosho kunye nokulinga, kunye nezinto ezenziweyo zokuba kutheni zisenziwa kwaye zisebenza njani izinto. Ndiza kuchaza izixhobo zokuqala, iindawo ezahlukeneyo kunye nendlela yokusebenzisa izinto ezahlukeneyo zemihla ngemihla ekwenziweni kweenqwelomoya.
Ukuba ezakho ziihelikopta, ndikushiyela esinye isifundo sokuncedisa nge Intshayelelo kwiihelikopta zombane.
Ukuqhaqhaqhafaza isondo esineemoto ezine
Ngenye imini sabeka i Umbono oqhumayo we-sclextric okanye i-slot car. Njengoko benditshilo ngenjongo yokubona ukuba zakhiwe njani ukundenza enye, ene-wheel-4 drive kunye neenjini ezimbini.
Ewe, ukuqhubekeka ndikhangela ulwazi ndiyidibanise IPeugeot 307 WRC de Isikali, bayithengisa njenge ukuqhuba 4.